Control Raspberry Pi Via Headless Mode [LAN] [Ubuntu] – NaingLinHan
December 2, 2016 /nainglinhan
Raspberry Pi ကို စပြီး လေ့လာသူတွေ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာက RPI နဲ့ ချိတ်ပြီး သံုးဖို့ Display မရှိတာပါ။ အိမ်က TV နဲ့ သံုးဖို့ကျလဲ အချိန်တိုင်း အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ.. အိမ်သားတွေ ကိုရီးယားကား ကြည့်နေတဲ့အချိန် TV သွားလုလို့မှမရတာ… အော်ထုတ်ခံရမှာပေါ့ .. 😛 ဒါတွေအဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?? အိမ်က TV ကို သံုးမရအောင် Antenna ကြိုးတွေ သွားဖြုတ်ထားမလား?? နောက်တာပါ.. TV လုဖို့ ကိစ္စကို မေ့လိုက်ပါတော့ 😛 ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်Desktop, Laptop ကနေပဲ RPI ကို Headless Mode နဲ့ သံုးလို့ရပါတယ်။ Mobile Phone ကနေလဲ သံုးလို့ရပါသေးတယ်… ဒါကိုတော့ နောက်ကြုံမှ ထက်ရေးပေးပါမယ်… ကဲစလိုက်ရအောင်.. ပထမဆံုး Network Cable တစ်ချောင်းလိုပါမယ်။ အိမ်မှာ Wifi ရှိရင်လည်း Wifi ပေါ်ကနေ သံုးလို့ရပါတယ်။ အခုတော့ LAN ကနေ သံုးနည်းကိုပဲ ပြောသွားပါမယ်။ Raspbian နောက်ထွက် Version တွေမှာ Security အတွက်ဆိုပြီး ssh ကို Default အနေနဲ့ ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရင်လို Headless Mode တန်းသံုးလို့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ssh ကို အရင် သွားဖွင့်ပေးရပါမယ်.. ပထမတစ်ကြိမ်တော့ Display နဲ့ ချိတ်ဖို့လိုပါမယ်… RPI ကို Display နဲ့ချိတ်ပြီး ပါဝါဖွင့်ပါ… ပြီးရင်အောက်က ပံုအတိုင်း SSH နဲ့ VNC ကို ဖွင့်ပေးပါ… ဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ နောက်အခေါက်တွေမှာ Display မလိုတော့ပါဘူး…
RPI နဲ့ ကွန်ပျူတာကို network cable နဲ့ ချိတ်ပါ။ Ubuntu ရဲ့ Unity bar က Network Icon ကို ရွေးပြီး အောက်ဆံုးက Edit connection ကို ရွေးပါ။
Add ကိုရွေးပြီး ကျလာတဲ့ Drop down menu က Ethernet ကိုရွေးပြီး create လုပ်ပါ။ Connection Name မှာ ကြိုက်တဲ့ နာမည်ပေးပါ။ IPV4 Setting ဆိုတဲ့ Tab ကို သွားပြီး Method မှာ Share to other computers ကို ရွေးပါ။ IPV6 ကို တော့ Ignore လုပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Connection လုပ်တဲ့ အဆင့်ပြီးပါပြီ။
RPI ရဲ့ IP ကို သိဖို့အတွက် အောက်က command နဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အပေါ်က ပံုအတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော့ RPI ရဲ့ IP က 10.42.0.96 ပါ။ RPI ရဲ့ IP ကိုမှတ်ထားပေးပါ။
SSH ကနေတစ်ဆင့် RPI ထဲကို ဝင်ပါမယ်… ssh pi@10.42.0.96 လို့ရိုက်ပါ… pi ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့် RPI ရဲ့ user name ကို ရိုက်ပေးရပါမယ်.. RPI ရဲ့ Default User name က pi ပါ… @ ရဲ့အနောက် က တော့ စောနက မှတ်ထားတဲ့ IP ပေါ့… Password မေးလာရင် RPI ရဲ့ Password ရိုက်ပေးရပါမယ်.. သူ့ရဲ့ Default Password ကတော့ raspberry ပါ…
RPI ရဲ့ Desktop ကို မြင်ရဖို့အတွက် စက်ထဲမှာ VNC Viewer သွင်းထားဖို့ လိုပါမယ်.. Real VNC Viewer ကို ဒီကနေ ရယူပါ…. Download ရလာတဲ့ VNC-Viewer-**.gz file ကို Extract လုပ်ပြီး သူ့ကို Run ဖို့အတွက် Permission ပေးရပါမယ်.. Terminal အသစ်ဖွင့်ပြီး chmod u+x ~/Downloads/VNC-Viewer-** ကို ရိုက်ပြီး Permisson ပြောင်းပေးပါ.. ဒါဆိုရင်တော့ extract လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ file ကို Double Click လုပ်ပြီး သံုးလို့ရပါပြီ… စောနက မှတ်ထားတဲ့ IP ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Connect လုပ်လိုက်ရံုပါပဲ… အဆင်ပြေပါစေဗျာ…
Categories: IOT, Raspberry Pi, UbuntuTags: Ethernet, Headless Mode, Network, Raspberry Pi, Raspbian, SSH, Ubuntu, VNC